Kalenda Kalenda nkwado nke saịtị Portal, goo (http://www.goo.ne.jp) bụ kalenda ọrụ yana mpempe akwụkwọ maka ọnwa ọ bụla na-agbanwe ka ọ bụrụ n'akpa na-enye gị ohere idobe ma jikwaa kaadị azụmaahịa gị, ndetu na nnata. . Isiokwu bụ Red String iji gosi njikọ dị n'etiti goo na ndị ọrụ ya. E mechiri ya na nsọtụ abụọ nke n'akpa uwe n'ezie nke na-eme ka ọ pụta ìhè na njiri ahụ. Kalenda n'ụdị obi ụtọ, ọ dị mma maka 2014.
Aha Mmado Nchịkọta vodka Stumbras a na-atụgharị anya na vodka Lithuania ochie na-eme ọdịnala. Imewe na-eme ka ngwaahịa ochie ọhụụ mechie ma dabara adaba na ndị ahịa. Mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ, ụbọchị dị mkpa maka ịme vodka Lithuania, akụkọ ọdịnala dabere n’ezi eziokwu, na nkọwa dị ụtọ, anya na-adọrọ adọrọ - ụdị gbachapụrụ agbachasị ọhụụ nke foto ochie, ogwe osisi slanted na ala nke na-emekọ ihe mejupụtara kpochapụla nke ọma, na mkpụrụ akwụkwọ na agba nke na-egosi njirimara nke ụdị ngwaahịa ọ bụla - niile na-eme ka nchịkọta vodka ọdịnala bụrụ nke na-enweghị atụ na nke na-adọrọ mmasị.
Kalenda Anyị wuoro gị obodo. E gosipụtara ozi NTT East Japan Corporate Sales Promotion na-ezipụta na kalenda nke oche a. Akụkụ dị n’elu nke kalenda ahụ bụ ụlọ ndị mara mma na-ebipụta ebe dị iche iche na-etolite otu obodo nwere obi ụtọ. Ọ bụ kalenda mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ịgbanwe ọmarịcha ụlọ ụlọ kwa ọnwa ma jupụta gị n ’obi ị ga na-enwe obi ụtọ kemgbe afọ niile.
Kalenda Nke a bụ kalenda desktọpụ nke eji ya rụọ ọrụ na-egosi oge ọyị ji arụ ọrụ mara mma. Ihe ngosipụta kacha ọhụrụ bụ mgbe egosipụtara ya, edoziri ihe eji ewepụta oge n’oge na ogo 30 maka ikiri kachasị mma. Newdị ọhụrụ a na-egosipụta ọkwa ọhụrụ nke NTT COMWARE maka iwepụta echiche ọhụụ. Enyere echiche na arụmọrụ kalịnda nwere ọtụtụ ide ederede na ahịrị ndị sara mbara. Ọ dị mma maka ịlele ngwa ngwa ma dị mfe iji, na-eme ka ihe dị na mbụ na -eme ya iche na kalenda ndị ọzọ.
Dustpan Na Broom
Dustpan Na Broom Ropo bu echiche idozi onwe ya dika ihe eji eme ya. N'ihi obere ibu nke mmiri mmiri nke dị n'ime ala nke apịtị ahụ, Ropo na-ejigide onwe ya. Mgbe ejiri nwayọ kpochapu ájá ahụ n'ụzọ dị mfe, ndị ọrụ nwere ike ịkpo broom na ntụpọ ahụ ma wepụ ya dị ka otu ebe na-enweghị nchegbu ọ bụla ịda. Ihe omuma ohuru ohuru a n’enye mmadu ime ka odi nfe di nfe ma nwekwaa nhulu nke a na-ewe iji mee ndi oru aka mgbe ha na-ehicha ala.
Mmanya Mmanya Nzube nke “5 Elemente” bụ nsonaazụ nke ọrụ, ebe onye ahịa ahụ tụkwasara ụlọ ọrụ ahụ aka nwere ikike ikwu okwu zuru oke. Ihe ngosipụta nke atụmatụ a bụ njirimara Rome "V", nke na-egosipụta echiche ebumnuche nke ngwaahịa a - ụdị mmanya ise ejikọtara ọnụ na ngwakọta pụrụ iche. Akwụkwọ pụrụ iche ejiri mee ihe maka akara ahụ na itinye usoro ihe eserese niile na-akpasu onye nwere ike iwere karama ahụ ma gbanye ya n'aka, na-emetụ ya aka, nke na-eme mmetụta miri emi ma na-eme ka ihe ncheta ahụ dịkwuo echefu.
Kalenda Aha Mmado Kalenda Kalenda Dustpan Na Broom Mmanya Mmanya